June 2018 | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo A line tareen cusub ayaa bilaabay, daboolaya Azerbaijan, Turkey, iyo Georgia. line wuxuu daboolayaa badan 820 Kiiloomitir oo caawinaysa dadka freights lagu daro tareenada rakaabka. marka hore, line ka noqon doono ugu horeeyay in ay ku xidhmaan Yurub iyo Shiinaha halka Goldogob Russia. Tareenka ayaa ka shaqeyn doona…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Waxaa jira tiro ka mid ah saldhigyada tareen xiiso leh oo firfircoon ee Spain. Waxaad ka heli doontaa xawaaraha sare, masaafada dhexdhexaad ah, gobolka, iyo nawaaxigeeda iyo hotel-tareen safarka dalka oo dhan. From saldhigyada casriga weyn in kuwa yaryar hareereeyeen by dabeecadda, kuwanu waa 10 ee Tareenka ugu xiisaha badan Spain…